नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री कहिले ?
Published on: August 23, 2020
शोभा पाठकः । हिन्दु महिलाहरु विशेषगरी नेपालमा यसलाई महिलाहरुले महान् पर्वका रुपमा मनाउने गर्छन् । महिलाका लागि मात्र विशेष पर्वका रुपमा यसको महत्व भएपनि पुरुषहरुको सुस्वास्थ्य र दी,र्घायुको समेत कामना गर्छन् । झ,ट्ट हेर्दा यो पर्व महिलाले पुरुषका लागि कामना गर्दै मनाएको देखिन्छ । तर, यसबाट महिलाको महानता पनि प्र,कट हुन्छ । महिला लै,ङ्गिक रुपमा पूर्वाग्रही र स्वार्थी हुँदैनन् भन्ने उदाहरण हो यो । आफूले बस्ने ब्रत, पूजा र आराधनाबाट प्राप्त फल पुरुषसँग पनि बाँड्ने महिलाको अभि,प्राय देखिन्छ । नेपाली महिलाहरु आफू के,न्द्रित नभई आफ्नो परिवार र समाजका लागि पनि सधै केन्द्रित भइरहन्छन् ।
आ,धा आकाश ढा,केका नेपाली महिलाहरु धार्मिक रुपमा पनि पुरुषको पनि हि,तचिन्तक देखिन्छन् । तर, के पुरुषले महिलाका लागि यो ह,दको उ,दारता र सकारात्मक भावना देखाउँछन् ? यो यक्ष प्रश्न हो । देशको समग्र अर्थ,तन्त्र देखि सामाजिक क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी यो,गदान पुर्याउने महिलालाई घर, समाज र राष्ट्रको ने,तृत्वका लागि अभि,प्रेरित गर्ने र सहयोग गर्ने गरिरहेको देखिदैनन् । पुरुषमा यो ह!दको पू,र्वाग्रह र महिलाको शक्तिलाई नद,रअन्दाज गर्ने स्वभाव छँदैछ । त्यसमाथि पनि नेपाली पुरुषहरुमा त्यो जरो बनेर गडिएको छ ।
आज तीजको अवसरमा हरेक पुरुष नेताहरुले बुझ्नुपर्छ कि महिलाहरु कति उ,दार छन् र पुरुषका लागि कतिसम्म हित,चिन्तक बनेर संस्कारको अभ्यास गरिरहेका छन् । के तिनले ती महिलामाथि साँच्चै न्या,य गरेका छन् ? महिलाको प्रगतिमा सहायक बनिरहेका छन् ? महिलालाई अगाडि बढ्न सघाइरहेका छन् ? यो प्रश्नको उत्तर हरेक पुरुषले दिनैपर्छ ।
रा,जनीतिक ने,तृत्व तहमा नेपाली महिलाहरु नपुगेका होइनन् । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । शैलजा आचार्य र साहना प्रधान पनि उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर, उहाँहरु कुनै पुरुष या परिवारको विरा,सतको कारणले हुनुभयो भन्नेहरु पनि छन् । उहाँहरुले राजनीतिमा दिनुभएको यो,गदानको यसरी अ,वमूल्यन गर्ने गरिएको छ । यो पुरुषप्रधान सोचको उपज हो । शैलजा र साहना त राजनीतिक जीवनको उ,त्तराद्र्धमा अपहेलित जस्तै हुनुभयो । नेपालको महिला आ,न्दोलनमा उहाँहरुले पुर्याउनुभएको यो,गदानको अ,वमूल्यनको मूल्य नेपालको महिला आ,न्दोलनले चुकाइरहेको छ ।
सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएर कुशल ने,तृ,त्व गर्नुभयो । उहाँ अझै लोकप्रीय हुनुहुन्छ । चित्रलेखा यादवले उपसभामुख बनेर जनआ,न्दोलनमा आफ्नो ने,तृत्वको खुशी देखाउनुभयो । सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री बनेर क्ष,मता प्रद,र्शन गर्नुभयो । तर, महिला देशको प्रधानमन्त्री बन्न अझै सकिरहनुभएको छैन । महिलाले प्रधानमन्त्री बनेर देश हाँ,क्न सक्छन् भन्ने विश्वका धेरै उदाहरणहरु छन् । तर, नेपालमा पि,त्तृसत्तात्मक सोच र महिलाको क्ष,मतामा प्रश्न गर्ने प,रिपाठीले यसमा अव,रोध सृजना गरिरेको छ । महिलामा पनि आ,त्मबल र आ,पसी एकताको खाँचो छ ।
देश हाँ,क्न सक्ने धेरै महिलाहरु नेपालमा हुनुहुन्छ । कतिपय उदीयमान महिलाहरु पनि हुनुहुन्छ । सुजाता कोइराला, डा. आरजु देउवा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, पम्फा भुषालका अला:वा नयाँ पुस्ताका रामकुमारी झाँक्री जस्ता जुझारु नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग सम्भावना धेरै छ । देशलाई ने,तृत्व दिएर महिलाको क्षमता प्रमाणित गर्ने सा,मथ्र्य पनि छ । राजनीतिमा संघर्षको पहाड नाघेर अगाडि बढेका महिलाहरुले यो देश हाँ,क्न सक्छन् । त्यो समय अब धेरै टाढा छैन भन्ने देखिदैछ । महिलाहरुले जसरी घर र परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छन् त्यसरी नै देशको राजनीतिक व्यवस्थापन कु!शलतापूर्वक गर्न सक्छन् । देशलाई स!मृद्ध बनाउन सक्छन्
८४ करोड ६५ लाखमा ख’रिद गरेको रेल सञ्चालन नहुँदै ‘वारेन्टी’ स-कियो
सामाजिक सञ्जालमा श्रीपेजसहितको घर्तीको तस्बिर र मिम भाइरल बन्दै , को हुन् ‘भाइरल राजा’ ? हेर्नुहोस
अर्को त्रा’स, निपाह भा-इरस
बि’रामी बुबाआमा पाल्न रिक्सा पेल्दै बालक, आफ्नो भविष्यको कुनै ठेगान छैन !
एमालेका ठूला सांसद लाजले भाग्न थाले : गगन थापा
घाँस काट्दै गरेकी महिलाको, कान काटेर कानको रिङ लुट्ने प-क्राउ
यिनै हुन ६ जनाको ह,त्यारा लोक बहादुर कार्की, यसकारण ह,त्या गरेको प्रहरी सामु बयान दिए
ज्ञानेन्द्र शाहि र टिममाथी नि’र्घा’त कु’ट’पि’ट ! गाडी सहित ज्ञानेन्द्र शाही क’ब्जामा! सक्दो सेयर गर्नुहोला।
सपथ पछि शेरबहादुर देउवाको ‘पहिलो निर्णय’ कुलमान घिसिङलाई’ विद्युत प्राधिकरणको ‘महानिर्देशक ?
रुपाजी तपाईं कामी, म सार्की जातीय कुराको अन्त्य गर्ने भए, आउनुहोस हामी विबाह गरौं भनेपछि…